माघ ४ गते देखि हराईरहेकी कल्पना चौधरी यस्तो अबस्थमा भेटीईन ! – Khabarhouse
माघ ४ गते देखि हराईरहेकी कल्पना चौधरी यस्तो अबस्थमा भेटीईन !
Khabar house | २८ माघ २०७६, मंगलवार ०६:३५ | Comments
काठमान्डौ : गत माघ ४ गते देखि हराइरहेकी कल्पना चौधरी भेटिएकी छिन ।रिचार्ज कार्ड किन्न घरबाट निस्केकी कल्पना बिराट नगरको एक होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । होटलमा भेटिएकी कल्पनाले टेलिफोनमा आमासँग कुराकानी गरेर काठमाडौं आउँदै गरेको जानकारी गराएकी छिन् ।
आमासँगको सामान्य झ’गडामा कल्पनाले घर छाडेर हिडेको खुल्न आएको छ । रिचार्ज कार्ड किन्न घरबाट निस्केकी कल्पनाले आमासँग बस्न नचाहेरै भागेको हुन सक्ने आमाले बताएका छन् । केहि दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भा’इरल भएपछी कल्पनाकी आमाले भने उक्त भिडियोमा ५/६ जना मिलेर नि^र्घात कुट^पिट गरिएकी किशोरी आफ्नी छोरी भएको बत्राएकी थिइन ।
तर,भिडियोमा कु’टाइ खाने युवती कल्पना चौधरी नभई मोरङकी रेविका बिसी भएको खुल्न आएपछि कल्पना कहाँ छिन् भन्ने जिज्ञासा जागेको थियो । फेसबुकमा शिशिर भण्डारीले एक स्टाटस लेख्दै उनी भेटिएको पुस्टि गरेका हुन् । कल्पना बिराट नगरको एक होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेकी हुन् ।